Funaanadda ay Kooxda Real Madrid ugu dabbaal-degayso hanashada horyaalka La Liga oo si aan ku talogal ahayn suuqa la soo dhigay… (Imise lacag ah ayaa lagu iibinayay?) – Gool FM
Haaruun July 16, 2020
(Madrid) 16 Luulyo 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa si aan ku talo-gal ahayn suuqa u soo dhigtay funaanadda ay ugu dabbaal-degi doonto hanashada horyaalka La Ligaha Spain.
Dukaanka rasmiga ah ee kooxda Los Blancos ayaa la soo dhigay funaanadda ay kooxdu ku dabbaal-degi doonto marka ay ku guuleysato horyaalka La Liga oo ay filayso inay caawa hanato haddii ay ka adkaato kooxda Villarreal.
Los Blancos ayaana rajaynaysa inay koobkeedii 34-aad ee horyaalka La Liga ku guuleysato caawa haddii ay garaacdo Villarreal, waxaana Real Madrid ay gashay qalad markii ay ay suuqa soo dhigtay funaanadda ay ku dabbaal-degi doonto marka ay horyaalka ku guuleysato kal ciyaareedkan 2019-20.
Inkastoo kooxda ka dhisan caasimadda Spain aysan weli xaqiijin ku guuleysiga horyaalka La Liga, haddana dukaanka kooxda labiskeeda lagu iibiyo ee dhinaca Online-ka ah ayaa la soo dhigay maaliyadda ay ku dabbaal-degi doonaan marka ay hantaan horyaalka La Liga haddii ay ka adkaadaan Villarreal kulanka caawa ka dhacaya garoonkooda Alfredo di Stefano.
Shaqsi Twitter-ka ay ugu qoran tahay @andrespgrm ayaa sawir ka soo qaaday Funaanadda ay Real Madrid ugu dabaal-degi doonto hanashada horyaalka oo ay dhabarka dambe uga qoran tahay 34 oo ah koobabka horyaalka ay haysan doonto haddii ay caawa xaqiijiso hanashada horyaalka La Liga iyo sidoo kale erayga Spanish-ka ah ee ‘campeones’ oo micnihiisu yahay kuwa heysta horyaalnimada.
Funaanaddaan la soo dhigay dukaanka kooxda Real Madrid ee ay u diyaarsatay inay ugu dabbaal-degto hanashada horyaalka La Liga ayaa waxa qiimo ahaan la iibinayaa halkii xabbo 109.95 euro.
Sida iska cad funaanaddaan midabkeedu caddaanka yahay ayaa si dhaqso leh looga saaray dukaanka Online-ka ee kooxda Los Blancos, waxaana loo maleynaynaa inaysan mar labaad iibkeeda soo bandhigi doonin ilaa Real Madrid ay ugu dambeyntii ku guuleysato horyaalka La Ligaha Spain.
Paul Pogba oo ku dhow inuu qandaraaska u kordhiyo Kooxdiisa Manchester United... (Imise sano ayuu qalinka ugu duugayaa?)
Xiddigo muhiim ah oo ka maqnaan doono kooxda Barcelona kulanka ay wajahayaan Deportivo Alaves